संसार परिवर्तन गर्नु छ भने सुरुवात आफैँबाट गर्नुपर्छ • Nepal's No. 1 Digital News Paper .
संसार परिवर्तन गर्नु छ भने सुरुवात आफैँबाट गर्नुपर्छ
वन्दना विष्ट आचार्य
वन्दना विष्ट आचार्यको, सानै देखि एक सफल व्यापारी बन्ने इच्छा थियो । आमा बुबा दुबैजना व्यापारी, सानैदेखि उहाँहरुको व्यापारमा सहयोग गर्दै जाँदा लक्ष्य अनुसारकै जीवनको बाटो सुरु भयो । जीवनको अर्को यात्रामा बिवाहपनि ब्यापारी श्रीमान्सँगै भयो । । अहिले श्रीमान्को ब्यापार ह्याण्डल गर्न सक्ने एक सक्षम सारथी हुन् । एम्बीए छैटौँ सेमेस्टरको विद्यार्थी वन्दनालाई यतिले मात्र कहाँ पुग्यो र !
अब त परिचय झनै बदल्नुपर्छ भन्ने सोच मनमा आयो । उनी लागिन् बिवाहित महिलाहरुको सौन्र्दय प्रतियोगिता मिसेस नेपाल ग्राण्ड २०१७ को प्रतिस्पर्धामा, अब त्यो प्रतियोगिताको ताज पहिरिने लक्ष्य छ । उनको बुझाईमा यो सौन्दर्य प्रतियोगिता मात्र बाहिरी सुन्दरता मापन गर्ने प्रतियोगिता हैन । यो त महिलाहरु भित्र लुकेर बसेको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने एउटा अवसर हो । बाँकी अंश कुराकानीमा……
सौन्दर्य प्रतियोगिता तपाईको सोख हो की प्रतिभा ?
विवाह अघि पनि मलाई मिस नेपाल जस्तै सौन्दर्य प्रतियोगितामा जान धेरै मन थियो तर सधैँ पढाई र कामले गर्दा मैले त्यस तर्फ ध्यान दिन पाईँन तर एक दिन जब मैले मिस्ट्रेस नेपाल ग्राण्डको अडिसनको निमन्त्रणा देखेँ, मलाई भित्रैबाट एक पटक कोसिश गर्न मन लाग्यो । परिवारलाई सोधेँ, सबै जना खुशी हुनुभयो ।
मेरो परिवार श्रीमान् सबैले मलाई जाउ, तिमीलाई मन लगेको कुरामा हामी साथ दिन्छौँ भन्नुभयो । र, श्रीमान् पनि म सँगै अडिसन दिन कुपण्डोल गयौँ । अनि एक हप्ता भित्र नतिजा आयो कि म छनौट भएँ भनेर। अनि हाम्रो तालिम सुरु भयो । म भन्छु सौन्दर्य प्रतियोगिता भनेको नै प्रतिभा हो ।
विवाहित महिलाका लागि सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागिता कत्तिको सहज छ ?
कोसिश गरियो भने सफलता आफैँ हाम्रो नजिक आउँछ । विवाहित नारीहरुकोलागि सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी हुन अवश्य सहज छैन भन्ने भनिन्छ तर त्यसो हैन, आफुले जानेको कुरा, आफुमा भएको, लुकेको प्रतिभा बाहिरा प्रस्तुत गर्न, आफ्नो एक पहिचान बनाउन पाएको अवसर हो सौन्दर्य प्रतियोगिता । बुझ्नेकोलागि यो सौन्दर्य प्रतियोगिता सहज नै हुन जान्छ ।
मिसेस नेपालको ताज जित्नुभयो भने देश र विश्व मानव समुदायका लागि के गर्ने सोच छ ?
मिसेस नेपालको ताज जितेँ भने सर्वप्रथम त मलाई साथ दिने हरेक पाईलामा मलाई सहयोग गर्ने मेरा परिवारलाई धन्यवाद दिन्थेँ । मलाई सिकाउनु हुने मेरा गुरुवर्गलाई वहाँहरुको मार्गदर्शनका लागि धन्यवाद दिन्थेँ र क्राउन जितेपटि मिडियामा आफ्नो एउटा पहिचान भएकोले गर्दा हाम्रो परिवारले स्थापना गरेको विशाल विष्ट मेमोरियल ट्रष्ट अन्तर्गत गरिने सामाजिक सेवा र कार्यहरुलाई अझ बढी प्रोत्साहन गरी, सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने जुन अठोट लिएर तीन वर्ष अगाडि संस्था खोलेका छौँ, त्यसलाई अगाडि बढाउँछु र विवाहित महिला भनेको घरको चुल्होमा मात्र सिमित नभई आफैँले पनि नयाँ कार्यको सुरुवात गर्न सकिन्च ।
आत्म निर्भरहुन सकिन्छ । परिवारलाई साथ दिन सकिन्छ र विवाह पछि पनि आफ्नो पहिचान बनाउन सकिन्छ भनेर सबै महिलाहरुको लागि एउटा उदाहरण बन्ने थिएँ । हाम्रो नेपालमा भई राखेको महिला सम्बन्धीको सामाजिक कुप्रथा जस्तै छाउपडी प्रथा, भ्रुण हत्या, दाईजो प्रथा, घरेलु हिंसा हटाउन मेरो जुन लक्ष्य छ त्यस कार्यमा म लाग्थेँ ।
गाउँगाउँमा जानकारी गराउथेँ, किनकी म पब्लिक फिगर भएर गर्ने काम र सामान्य नागरिक भएर गर्ने काममा फरक पर्छ । पब्लिक फिगर हुँदा सामाजिक कामको सुरुवात गर्न सहज हुन्छ ।
बिवाहितका लागि यस्ता खालका प्रतियोगितामा जान अनुमती लिनुपर्छ ?
हाम्रो समाज अझै पनि नारी स्वतन्त्रताकालागि पश्चिमी मुलुक जस्तो छैन । हामी अझै पनि घरमा बुहारी घरमै बसोस्, खान पकाओस्, लुगा धोओस्, बाहिरी काममा नहिँडोस्, अझ सौन्दर्य प्रतियोगितामा त झन् जानै हुन्न जस्तो जुन सोच अझै पाईन्छ त्यस्तो सोच भएको समाजमै बसेका दिदीबहिनीले यस्ता प्रतियोगितामा भाग लिन परिवार र श्रीमानको अनुमति लिन अवश्य जरूरी हुन्छ ।
तपाईले को-कोसँग लिनुभयो ?
मैलेचाहीँ मेरो श्रीमान् अनि परिवारका सदस्यहरुलाई सोधेँ, यो कुरामा आफु एकदमै भाग्यमानी ठान्छु किनकी मेरो श्रीमान् र परिवार सधैँ मलाई प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ, साथ दिनुहुन्छ ।
यो प्रतियोगिताले तपाई र समाजलाई के सहयोग पुर्याउछ ?
यो प्रतियोगिताले स्वयम् म भित्रचाहिँ, म भित्र लुकेका प्रतिभाहरु जुन मैले देखाउने अवसर पाएको थिइनँ त्यसलाई देखाउने अवसर पाएँ । एउटा यस्तो मञ्च पाएँ जहाँबाट आवाज उठाउँदा त्यो आवाजको केही महत्व हुन्छ, आफ्नो सामाजिक एउटा पहिचन बनाउने मौका पाएँ । म जस्तै अरु दिदीबहिनीहरुसँग चिन्ने मौका मिल्यो ।
यसै मिसेस नेपाल ग्राण्ड २०१७ को प्रतिष्पर्धी भएर मैले विष्णुमती सफाई अभियानमा सहभागी भएँ, नयाँ–नयाँ कुरा सिक्न पाएँ । आफुमा भएको खुबीलाई निखार्ने मौका पाएँ । संस्थागत हिसावले वृद्धाश्रम जाने, वहाँहरुको मुस्कनको एउटा माद्यम बन्ने, नारीको हकहितकालागि हामी एउटा अभियानको तयारीमा छौँ । यो सबले समाजलाई अवश्य केशी देन दिन्छ र अरु विवाहित नारीका लागि हामी एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छौँ ।
अबको लक्ष्य के ?
अब तत्कालको लक्ष्य त मिसेस नेपाल ग्राण्ड २०१७ को ताज जित्नु र सम्पूर्ण नेपाली नारीहरुकोलागि एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्नु हो ।
अन्त्यमा के भन्नु छ की ?
अन्त्यमा म भन्न चाहन्छु कि ! हामी नारीले कहिले पनि हामी नारी हो, हामी कमजोर छौँ, हामीबाट सुरुवात गर्न मिल्दैन भन्ने जस्तो सोचलाई हटाउनु पर्छ र, संसार परिवर्तन गर्नु छ भने सुरुवात आफैँबाट गर्नुपर्छ ।
प्रदेश ३ को ‘मुख्यमन्त्री मै हुँ : राजधानीमा ७ सय ५० रूपैयाँमा एक सिलिन्डर ग्यास‘ -स्थापित
सरल एजेन्डाः आर्थिक क्रान्तिकाे बाटाे -रवीन्द्र अधिकारी
‘झापाले लोकतान्त्रिक छवि बनाएको छ म जित्छु’ – देउमान थेवे (देउकुमार)